Göteborg oo Lagu Xiray Saddex Iskuul oo Islaami Ah
HomeWararka SwedenGöteborg oo Lagu Xiray Saddex Iskuul oo Islaami Ah
October 27, 2021 Wararka Sweden 0
Hay’adda kormeerka dugsiyada ayaa go’aansatay in ay xidho saddexda dugsi ee Römosseskolorna ee Göteborg laga bilaabo 19ka November, iyaga oo u arkayay in xubnaha guddiga “aanay ku haboonayn” in ay qabtaan hawlo waxbarasho.
600 oo arday ayaa go’aanka saameyn ku yeelan doona, kaasoo ay degmadu ku qasbanaan doonto inay u wareejiso dugsiyo kale.
Seddexda dugsi ee madaxa bannaan ee Römosseskolorna ee Ranbirn, Gordesten iyo Angesbury, kuwaas oo dhamaantood ah kuwo Islaami ah oo xiriir la leh Ururka Iskuullada Horumarka (Framstegsskolan) ee Göteborg, waa la xirayaa. Sida laga soo xigtay SVT maanta.
Kormeerka dugsigu wuxuu tixgeliyey in xubno badan oo ka tirsan guddiga maamulka ee ururka aysan ku habboonayn sii wadida hawlaha waxbarashada.
“Ma jirto wax kalsooni ah oo lagu qabo guddiga maamulka,” ayuu yiri kormeeraha guud Johan Kellenfeldt